UNWTO: matihanina momba ny fizahan-tany hiresahana modely fandraisam-bahiny momba ny toeran-tendrombohitra any Andorra
Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » UNWTO: matihanina momba ny fizahan-tany hiresahana modely fandraisam-bahiny momba ny toeran-tendrombohitra any Andorra
Febroary 20, 2018
Ny andiany faha-10 an'ny Kongresy Iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany Snow sy Mountain dia hatao ny 21 ka hatramin'ny 23 martsa 2018 ao Andorra, mitondra ny lohateny hoe "Shaping the Future of Hospitality in Mountain Destinations". Ny Kongresy dia karakarain'ny World Tourism Organization (UNWTO), ny Governemanta Andorra ary ny Commune of Escaldes-Engordany. Ny hetsika, izay atao isaky ny roa taona, dia mankalaza ny faha-roapolo taonany amin'ity taona ity.
Hihaona amin'ireo matihanina fizahan-tany isan-karazany ny fihaonana, manomboka amin'ny mpitantana ny faritra fizahan-tany an-tendrombohitra ka hatrany amin'ireo mpandraharaha amin'ny sehatry ny fampiantranoana.
Ity edisiôna ity dia misy mpandahateny iraisam-pirenena eo amin'ny telopolo eo ho eo ary hotokanan'i Antoni Martí, Lehiben'ny governemanta Andorra, Zurab Pololikashvili, sekretera jeneralin'ny UNWTO, ary Trini Marín, ben'ny tanànan'i Escaldes-Engordany.
Ny fiheverana vaovao momba ny 'fandraisana vahiny'
Mandritra ny Kongresy, ny mpandray anjara dia hiresaka lohahevitra toy ny fametrahana ny toeran'ny fizahan-tany fizahan-tany, ireo fanambin'ny fandraisam-bahiny, ny fiantraikan'ny serivisy fizahan-tany vaovao na ilay antsoina hoe fizarana toekarena, faharanitan-tsaina artifisialy ary fiofanana ho singa fototra hahombiazan'ny toerana iray.
Ny hetsika dia hamboarina ao anatin'ny enina andiany, izay hatao ny 21 sy 22 martsa ao amin'ny Andorra la Vella Congress Center. Ny zoma 23 martsa ho avy izao, ny fitsidihana ara-teknika dia hahitana fitsangatsanganana ireo fotodrafitrasa vaovao an'ny ActuaTech ao Caldea-Inúu, ary koa ireo fialamboly isan-karazany.
Kaongresy eran-tany momba ny fizahan-tany amin'ny lanezy sy tendrombohitra
Ny Kongresy Eran-tany momba ny fizahan-tany amin'ny Snow sy Mountain dia teraka tamin'ny fandraisana andraikitra avy amin'ny UNWTO, ny Governemanta Andorra ary ny Kaominin'i Andorra fito, miaraka amin'ny tanjona hametrahana sehatra maharitra ho an'ny fifanakalozan-kevitra momba ny fampandrosoana sy ny faharetan'ny fizahan-tany amin'ny faritra be tendrombohitra. Atao isaky ny roa taona.
Nifandona tamin'ny tranofiara-traktera tany Estonia ny fiaran-dalamby mpandeha, 9 naratra
Airbus dia nanolotra ny A350-1000 voalohany hanombohana ny mpanjifa Qatar Airways